किन सपिङ मलहरूमा एलईडी स्क्रिन महत्त्वपूर्ण छ?
किन सपिङ मलहरूमा एलईडी स्क्रिन महत्त्वपूर्ण छ? सहरीकरणको द्रुत बृद्धिको साथ, शपिंग मलहरू तपाईंको जीवनको केन्द्रमा अवस्थित छन्। विश्वमा किनमेल केन्द्र संस्कृति एक उल्लेखनीय घटना भएको छ जसले चाँडै तपाईंको जीवनशैली, बानी र शहर स्पर्शलाई परिवर्तन गर्दछ। यी ठाउँ, जहाँ...
एलईडी बिलबोर्डहरूको उपयोग क्षेत्रहरू
LED बिलबोर्डहरूको उपयोग क्षेत्रहरू LED बिलबोर्डको साथ उत्तम समाधानहरू विकास गर्न सम्भव छ, जुन खेलकुद क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने उपकरणहरू मध्ये एक हो! खेलकुद शाखा वा प्रतियोगिताको स्तर जस्तोसुकै भए पनि, बिलबोर्डको साथ गुणस्तरीय समाधानहरू प्रदान गर्न सम्भव छ। यस कारणले,...
किन थप चर्चहरूले एलईडी भिडियो वाल स्थापना गर्छन्?
किन थप चर्चहरूले एलईडी भिडियो वाल स्थापना गर्छन्? विगत दुई दशकदेखि, चर्चहरूले सेवाहरूमा दृश्य तत्वहरू थपेर पूजामा संलग्न भइरहेका छन्। एक पटक मुख्य रूपमा भजनमा आँखा खन्याउनमा केन्द्रित भएपछि यो अब भित्तामा माउन्ट गरिएको प्रक्षेपण सामग्री हेर्नको लागि अधिक सामान्य छ। पछिल्लो समय धेरै चर्च...
HDR बनाम SDR: के फरक छ? के HDR भविष्यको लगानीको लायक छ?
HDR बनाम SDR: के फरक छ? के HDR भविष्यको लगानीको लायक छ? के तपाईंले कहिल्यै HDR बारे सुन्नुभएको छ? आजकल HDR हाम्रो जीवनमा जताततै पप अप भइरहेको छ र हामीले HDR सामग्रीहरू मोबाइल, क्यामकोर्डर, YouTube, Netflix, वा 4K UHD Blu-ray DVD जस्ता स्ट्रिमिङ सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्छौं। तर, के हो...
HDR प्रणालीहरू एलईडी स्क्रिनहरूमा नवीनतम
HDR प्रणालीहरू LED स्क्रिनहरूमा सबैभन्दा नयाँ के तपाईं LED स्क्रिन किन्न लाग्नुभएको छ र HDR शब्द कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने थाहा छैन, (High Dynamic Range, अंग्रेजीमा यसको संक्षिप्त नाम)? चिन्ता नगर्नुहोस्, यहाँ हामी तपाइँलाई यो व्याख्या गर्न जाँदैछौं। HDR, छोटकरीमा, तपाइँको LED स्क्रिनको भाग हो जुन पुन: ...
बाहिरी एलईडी स्क्रिन कसरी छनौट गर्ने
21-08-15 मा व्यवस्थापक द्वारा
बाहिरी एलईडी डिस्प्ले टेक्नोलोजीको द्रुत प्रगति र परिपक्वताको साथ, आउटडोर एलईडी स्क्रिनका अनुप्रयोगहरू अधिक र अधिक लोकप्रिय छन्। यस प्रकारको एलईडी स्क्रिन मिडिया, सुपरमार्केट, घर जग्गा, सडक, शिक्षा, होटल, विद्यालय, इत्यादिमा व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जबकि धेरै प्रदर्शनहरू निरन्तर रूपमा देखा पर्छन्।